Mulkiilaha IKEA iyo Taageeradiisii Xagjirka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mulkiilaha IKEA iyo Taageeradiisii Xagjirka
La cusbooneeyay onsdag 24 augusti 2011 kl 16.14
La daabacay onsdag 24 augusti 2011 kl 09.00
Buug ay qortay Elisabeth Åsbrink, kana howl-gasha idaacadda la iska daawado ee SVT ayay bannaanka u soo saartay in mulkiilaha IKEA Ingvar Kamprad uu si ka ballaaran intii horay loo haystay ugu dhex milmanaa dhaqdhaqaaqii Naaziga.
Kamprad ayaa sidoo kale sida ay buuggeeda ku qortay Elisabeth Åsbrink in marka laga yimaado dhaqdhaqaaqii fashiistada ee Nysvenska uu sidoo kale ka mid ahaa ururkii fikirrada Naaziga dibadda la taagnaa ee dhaqdhaqaaqii Lindholm.
Firfircoonidii Kamprad oo dhaqdhaqaaqiisii Naazigu uu aad u xooganaa ayaa sababay in ciidammadii sirta ee waagaasi dalka ka jiray ay u furaan sannadkii 1943 fayl loogu magac daray Nazist.
– Ciidanka ammaanku waxay u arkeen in loo baahnaa in Kamprad oo waagaa 17 jir ahaa indhaha lagu hayo. Waxay uumi ku furi jireen waraaqihiisa si looga koobiyeeyo waxyaabihii ku qornaa, waxay kaloo baadi-goobayeen war-geeysyada u macmiilaa, sida ay sheegtay Elisabeth Åsbrink.
Elisabeth Åsbrink waxay kaloo bannaanka soo dhigtay inuu Kamprad saaxiib la ahaa muddo dheer illaa iyo 50-meeyadii Per Engdahl ahaana hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii fashiistada ee Nysvenska. Waana xilliyadii uu Engdahl ugu firfircoonaa. Iyadoona uu u bogidda uu Per Engdahls u bogsanaa uu weli qabo.
– Sannad hortii ayuu Ingvar Kamprad igu yiri inuu ”Per Engdahl yahay shakhsi wayn, inta uu nool yahayna middaa uu qalbadda ku hayn doono”, sida ay sheegtay Elisabeth Åsbrink.
Taariikh dhacdo hore
Sida uu sheegay Per Heggenes, af-hayeenka Ingvar Kamprad, sida uu sheegayna xiriir ey wada yeesheen maanta barqadii ayaa sheegay in falalka uu buuggani qoraya yihiin kuwo waa hore dhacay ee qadiim ah:
- Waa xalad taariikh hore dhacday la xiriirta, waa fal dhacay 70 - sano hortood. Hore ayuu Ingvar marar badan uga bixiyay raali-gelin cid walba oo ammuurtaani khuseeyey, iyo sidoo kale isaga oo sheegay in aannu maanta wax taageero ah u hayn xisbiga naaziga, sida uu sheegay Per Heggenes.
Inuu Kamprad la socday inuu fayl ku lahaa hayaddii sirta ee waagaasi ayuu Per Heggenes sidan ku jawaabay:
- Maya, lama aannu socon. Annaga oo dhan ayey nagu ahayd wax cusub inuu Ingvar Kamprad fayl ku lahaa Säpo. Dhanka kale ma ahan wax lala yaabo maadaama ay middaasi ka mid ahayd howlihii Säpo loo xil-saaray xilligaa iyo iney la socdaan dhammaan kooxaha siyaasadda ku dhisan.